लक्षण नदेखिएपछि २७ कोरोना संक्रमित अस्पतालबाट डिस्चार्ज - News Birat
बुटवल, २३ जेठ-बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालबाट २७ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन् । कोरोनाका लक्ष्ण नदेखिएपछि उनीहरूलाई आज डिस्चार्ज गरिएको हो ।
संक्रमित भएर १४ दिन आइसोलेसनमा बसेका उनीहरूमा कोरोनाको कुनै पनि लक्षण नदेखिएपछि अस्पतालले शुक्रबार २७ जनालाई डिस्चार्ज गरेको हो । उनीहरूलाई २ हप्ता होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. सुर्दशन थापाले जानकारी दिए ।
सरकारले गत बुधबार १४ दिन आइसोलेसन बसेका तर लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई घर पठाउन निर्देशन दिएसँगै उनीहरूलाई परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गरिएको डा. थापाले बताए । ‘निर्देशनमा लक्षण नदेखिएका कसैलाई पनि पीसीआर परिक्षण नगर्नु भन्ने थियो । त्यही आदेशमाथि टेकेर आज २७ जनालाई डिस्चार्ज गरेका हौँ ।’ उनले भने ।
डिस्चार्ज भएर जानेहरूमा रुपन्देहीका १८ र कपिलवस्तुका ९ जना रहेका छन् । अब आइसोलेसन अस्पतालमा कपिलवस्तु, रुपन्देही र दाङका ६ जना संक्रमित अस्पतालमा रहेका छन् ।
शुक्रबार, २३ जेष्ठ २०७७, २१:०३ June 5, 2020 मा प्रकाशित